‘लाज लग्दैन ? एउटी युवतीको जीवन बर्बाद गरिदियौ, रियासँग माफी माग अब - हिपमत
‘लाज लग्दैन ? एउटी युवतीको जीवन बर्बाद गरिदियौ, रियासँग माफी माग अब
नायिका हुमा कुरेशीको विशेष रोष देख्न पाइयो । उनी सबैले रियासँग माफी माग्नुपर्ने चाहेकी छिन् । उनका अनुसार सुशान्त केसमा जसले पनि मर्डर थ्योरीलाई उचालेका थिए, सबै विरुद्ध कारवाही हुनुपर्छ । उनले ट्वीट गरेकी छिन्, ‘सबैले रियासँग माफी माग्नुपर्छ । कसले मर्डर थ्योरी फैलाए, यसबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ । लाज लाग्नुपर्ने हो कि आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्नका लागि एक युवती र परिवारको जीवन बर्बाद पारियो ।’
कोरोनाबाट मोरङकी पाँच महिने बालिकाको मृत्यु